ရထား | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
လက်ရှိရထားသတင်း၊ အမြန်ရထားသတင်း၊ မတော်တဆမှုများနှင့်ရထားနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံး
တစ်ကြိမ်မှာပြီးစီးခဲ့ခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးမီးရထား၏တောင်ပိုင်းဒေသများသို့နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးမှမြောက်ပိုင်းကနေကျောက်မီးသွေးသယ်ဆောင်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့တရုတ်နိုင်ငံ, တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Jiangxi ပြည်နယ်၏ Ji'an မြို့၏အတွင်းပိုင်းမွန်ဂိုလီးယား Hole Baoji ရွာ [ပို ... ]
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းဖောက်လုပ်မည့် 2011-2023 2023 သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်မြို့တော်သို့ရောက်မည်။ 29 တစ်ရက်ကြာ Edirne-Kars ခရီးကို 1.5 နာရီသို့လျှော့ချလိမ့်မည်။ 8 ဘီလီယံဒေါ်လာ [ပို ... ]
Thessaloniki-Alexandroupoli (Alexandroupoli) ရထားကညာခရီးစနေနေ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်မတော်တဆမှုသုံးစွဲစေသည်။ Thessaloniki-Alexandroupolis ရထားမြောက်ပိုင်းဂရိနိုင်ငံဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်သမီးကညာကိုခရီးနှစ်ခုကျွဲသို့ပျက်ကျခဲ့စေသည်။ အဆိုပါတိုက်မှုအပြီးသတင်းAzınlıkçaလွှဲပြောင်းခြင်း, ခေါငျးအဆိုအရ [ပို ... ]
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သူသည်ကားမောင်းသူဖြစ်ပြီးမည်သို့မောင်းရမည်နည်းဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ ယာဉ်မောင်းသည်ခရီးသည်များသို့မဟုတ်ကုန်တင်များသယ်ဆောင်ထားသောလျှပ်စစ်၊ ဒီဇယ်နှင့်ရေနွေးငွေ့ရထားမီးရထားစက်ခေါင်းများကိုမောင်းနှင်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား YHT စက်ယန္တရားများ [ပို ... ]
ဟောငျးစီးတီး Transit အတွက်ကျင့်ဝတ်
သင်သိသည့်အတိုင်းမြေအောက်ရထားများပိုမိုလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ရန်ခရီးသည်များ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုသာမကယာဉ်မှထွက်ခွာလိုသည့်ခရီးသည်များ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ဦး စားပေးသင့်သည်။ ဒါ့အပြင်ဆင်းသက်နှင့် [ပို ... ]
သန့်ရှင်းသောမြေမှနောက်ဆုံးရထား - Hejaz မီးရထား
သန့်ရှင်းသောပြည်မှနောက်ဆုံးရထား - Taksim Metro Art Gallery တွင်မက္ကာ၊ မက်ဒီနာနှင့်ကာဘာတို့၏အနှစ်တစ်ရာဓာတ်ပုံများကိုဆက်လက်ပြသနေသည်။ 10 70 ဓာတ်ပုံများ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များသည်သြဂုတ်လအထိပြသလိမ့်မည် [ပို ... ]
တစ်နာရီမြန်နှုန်းစူပါမြန်မီးရထားဆောက်လုပ်ရေးနှုန်းတရုတ် 800 ကီလိုမီတာကိုသင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်
Çin’de iki şehri arasında hızı 800 kilometreye ulaşabilecek süper hızlı tren inşa ediliyor. Çengdu-Çongçing hattında çalışacak tren yolculuğu 30 dakikaya indirecek. Çin saatte 800 kilometre hıza ulaşabilecek süper hızlı tren [ပို ... ]
အနစ်နာခံတောင်တက် YHT ၏ပွဲ၏စည်းမျဉ်း
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Cahit Turhan မှ YHT လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွက်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပွဲကျင်းပခြင်းသည်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပွဲတော်ကြောင့်ရထားဖြင့်ခရီးထွက်လိုသောနိုင်ငံသားများသည်သားကောင်မဟုတ်သူများနှင့်ခရီးသည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ပြောကြားခဲ့သည် [ပို ... ]
နိုင်ငံပေါင်းမည်သို့ပင်ဆိုစေကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးရထားရှိခြင်းခဲ့ကြသည်။ Xnumx'unc တူရကီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုများ၏စာရင်းအပေါ်ရာထူးဂျပန် breasts သိရသည်။ အမြန်ဆုံးရထားနှင့်အတူတိုင်းပြည်များအတွက်စာနယ်ဇင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းမီဒီယာများ၏ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများ၏အေဂျင်စီများ, [ပို ... ]
အဆိုပါမီးရထား Express ကိုလိုင်းကနေ New ကိုခရီးသွား2ပို
တူရကီ-Kars ခရီးသွားဧည့် Orient Express ကို၎င်းတို့၏လေ့လာရေးခရီး TCDD စတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ခုရထားဤအင်္ဂါရပ်ကိုပိုမိုန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်။ သတင်းHabertürk Aydilek Olcay, ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအဆိုအရခရီးသွားရထားများအတွက် TCDD ပြင်းထန်သောဝယ်လိုအားရောက်ရှိမည် [ပို ... ]
သူတို့အလွန်သေးငယ်သောခွကေိုသူငယ်တန်းထုတ်လုပ်ရန်အထူးစီမံကိန်းများ, ပညာရေးရူပါရုံကိုနောကျထပျပထမဦးဆုံးနှင့်အတူပေါ်လာ။ "ပညာရေး-သင်ကြားမှုမီးဖိုချောင်၏အသက်ပေတည်း။ အဆိုပါသင်တန်းဆရာခြွင်းချက်စားဖိုမှူးများမှာသင်ဤမီးဖိုချောင်ထဲကအရအဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်သည်။ တိုင်းမုန့်ညက်စံချိန်စံညွှန်းများ [ပို ... ]
Eskisehir ရထား Wagon ကနေစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ Theft
Eskisehir အတွက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသို့ခေါ်ဆောင်သွားသူ 750 လူမျိုး၏ဘာသာစကား Turkish ပြည်နယ်မီးရထားရထားလှည်းတန်ဖိုးကိုသူတို့အကြောင်းကို2တထောင်ပေါင်ဖြစ်သောအမျိုးမျိုးသောစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ, ခိုးယူကြောင်းသမျှသံသယနှင့်အတူဖမ်းမိ။ လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များEskişehirပြည်နယ် Gendarmerie စစ်ဌာနချုပ်၏အဆိုအရ [ပို ... ]